Wacom ဝါး Spark ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Wacom ဝါး Spark ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Wacom ဝါး Spark ပယ်ကြီးမြတ်ဖြစ်ခြင်းမှည့်အနည်းငယ် features တွေဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါစိတ်ကူးသံကိုဖြစ်ပါတယ် - သင်သည်မည်သည့်စက္ကူကိုသုံးနိုင်သည်ထို့ကြောင့် pad ပါ၏နောက်ကျောမတ်လုပ်.
ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အသစ်စက္ကူစနစ်ကသာမန် A5 စက္ကူပေါ်တွင်သင်၏ကလောင်လေဖြတ်ခြေရာခံနှင့်ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်က Output ဖြစ်ပါတယ်, PDF ဖိုင်ရယူရန်, စာသားသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မှင်, ဒါပေမယ့်ပြိုင်ဘက်ကိုက်ညီမနိုင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Wacom ဝါး Spark ပြန်လည်သုံးသပ်: ဒစ်ဂျစ်တယ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူကလောင်နှင့်စက္ကူ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com သောကြာနေ့ 8th April လပေါ်များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ Wacom ဝါး Spark ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံကိုသင်၌ရေးခြစ်ရန်နှင့်ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်းမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဟိုက်ဘရစ်စက္ကူ notepad ဖြစ်စေခြင်းငှါတံ-ထုတ်လုပ်သူရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုသည်.
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကညစ်တံနဲ့ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးကလောင် system ကိုအောင်သည်? စက္ကူခံစားရပြီးတက်ဘလက်၏မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်၏ဖန်မှကွဲပြားခြားနားပြုမူနှင့်များစွာသောလူများကပိုနှစ်သက်မိသောကြောင့်, သို့သော် Scan ဖတ်စက်သို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံနှုနျးရန်မလိုဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ္တူချင်.
အခြားသူများကဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြ, ဒါပေမဲ့ Wacom ကပြိုင်ဘက်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားစရာအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းသုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဝါး Spark မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာနှစ်ခုသည်: တစ်ဦးစံ-ရှာဖွေနေကဘောဘောပင်နှင့်စာရွက်တစ်ပုံမှန် A5 pad ပါရရှိထားသူတစ်စမတ်ဖိုလီယို.
အဆိုပါဘောပင်ဆိုပုံမှန်ကဘောဘောပင်နှင့်တူပြုမူ; ကန့်နည်းနည်းပိုထူင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အ Livescribe Smartpen မတူဘဲ 3, ဒါကြောင့်စမတ်င်သောကလောင်သို့မဟုတ်စက္ကူမဖြစ်, ဒါပေမယ့်စက္ကူအောက်မှာအ pad ပါ: ကဒစ်ဂျစ်တယ်လေဖြတ်အဖြစ်သင့် scrawls ကိုထင်ဟပ်.
ဒါဟာကလောင်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ထုတ်မယ်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အစာမကျြနှာပျေါတှငျအခြို့သောဖိအား sensitivity ကို, မှတ်ဉာဏ်၌သူတို့ကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဝါး Spark app ကိုတစ်ဦးက iOS သို့မဟုတ် Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက် Bluetooth မှတဆင့်သူတို့ကိုလွှဲပြောင်း.
သင်သည်သင်၏အလုပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ကလောင်နှင့်အတူပြုပါ, ခလုတ်တစ်ခုထိမှန်နှင့်ပုံရိပ်ကိုဒီဂျစ်တယ်နောက်ပိုင်းတွင်ဘို့ကယ်တင်ခြင်း. ထိုအခါသင်သည်ထိုစာမျက်နှာကိုဖွင့်နိုင်ပြီးနောက်တဖန်စတင်. သငျသညျလက်တွေ့လည်းအထူမဟုတ်ကြောင်းမည်သည့် A5 pad ပါအသုံးပွုနိုငျ – ပေးထားသည့် pad ပါသည် 30 စာရွက်များ, ဒါပေမယ့် 50-စာရွက် pad ပါလည်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာတခြားအလားတူနည်းပညာကျော်ဝါး Spark ရဲ့အကြီးမားဆုံး differential ဖြစ်ပါသည်: အများဆုံးကသင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံရန်အထူးစက္ကူလိုအပ်.
အောက်ခြေပေါ်မှာ switch ကိုတောက်ပါနဲ့ LED ပေါ်မှာ powered ရဲ့အလျှင်းစာမျက်နှာအပေါ်မှတျတမျးတငျထားခဲ့သငျသညျပွောပွဖို့စိမ်းလန်းသောပြသထားတယ်. ထိုကလောင်စက္ကူကိုထိမိသောအခါအ pad ပါအချို့သောရေးခြစ်ရန်နှင့်တောက်ပသောအပြာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်သောအခါ, LED မီးအပြာလှည့်.
စက္ကူကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဖိုလီယိုတှကေိုပိတျ, ကလောင်, pad ပါနဲ့လမ်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့် gadget က. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါအကောင်းဆုံး bit နဲ့ဘောပင်ပုံမှန်ခံစားရကြောင်း, မည်သည့်အနည်းငယ်ပိုကြီးကဘောတူ. ဒါပေမယ့်လည်းတစ်နည်းနည်းစျေးပေါခံစားရ, ထိုကလောင်ဦးထုပ်အမြဲသုံးစွဲသည့်အခါအဆုံးအပေါ်နေဖို့မပါဘူးနှငျ့သငျသာကဘောသည့်အရာတစ်ခုပြောင်းလဲနိုင်သည် – သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးကလောင်မသုံးနိုင်.
အဆိုပါဖိုလီယိုကောင်းစွာလုပ်ခံစားရ, ဒါပေမဲ့ဒီလိုသေးငယ်တဲ့ notepad ဘို့အတော်လေးနေရတယ်လို့ဖြစ်ပါသည် – နှင့် A5 မှတ်ချက်ဆည်းပူးနေနှင့်ပုံဆွဲဘို့အတော်လေးကျဉ်းကျုတ်ရှိနိုင်ပါသည်. ဒါဟာကလောင်များအတွက်သေးငယ်တဲ့စလစ်အိတ်ကပ်ရှိပါတယ်, ဗီဒီယိုကလစ်အားဖြင့်ကျင်းပ, စက္ကူနှင့်အရပျ၌သူတို့ကိုကိုင်တဲ့သံလိုက်ချိတ်၏ကုန်စာရွက်များများအတွက်အိတ်ကပ်.
ငါစမျးသပျဗားရှင်း Wacom တစ်ဦး "gadget ကအိတ်ကပ်" ခေါ်ဆိုသောအရာကိုခဲ့, ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေကိုအချို့သောများအတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်ဖြစ်အံ့သောငှါတက်ဘလက်ဗီဒီယိုကလစ်များနှင့်အခြားပူးတွဲပါဖိုင်တို.
အ pad ပါအပေါ်ရေးသားခြင်းသဘာဝအခံစားရ, ဒါပေမယ့်ဖိုလီယို၏ကျန်၏အမြောက်အများလမျး၌ရနိုင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ယူပြီးရေးထားလျက်ရှိ၏မှတ်စုများအတွက်စနစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်. စာမျက်နှာတစ်ခုပြီးစီးခြင်း, app ကိုအတူခလုတ်ကိုနှင့်ထပ်တူပြုခြင်း hit. ထိုအရပ်မှသင်တို့ကိုလက်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှုကို အသုံးပြု. text ကဲ့သို့သင့်ရဲ့လက်ရေးမှတ်စုတင်ပို့နိုင်, တစ်ဦး JPG image ကိုအဖြစ်, တစ်ဦးကို PDF အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ် Wacom မှင်လှာဘာသာစကားများအဖြစ် (လိမ့်မည်) ဒစ်ဂျစ်တယ် inking format ကိုထောက်ပံ့သောအခြား app တွေကိုမှတင်ပို့ဘို့ဖိုင်.
အဆိုပါဝါး Spark app ကို, အနည်းဆုံး Android ပေါ်မှာ, အလွန်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးသည်မဟုတ်. သငျသညျကိုသာတစ်ကြိမ်စာမျက်နှာတင်ပို့နိုင်, သောစိတ်ပျက်စရာရနိုင်, နှင့်စာသားအသိအမှတ်ပြုမှု, တစ်ဦးကြိုဆိုထို့အပြင်စဉ်, ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူတန်းတူတက်မဖြစ်. ဒါဟာပုံမှန်တည်းဟူသောငါ၏ neatest လက်ရေးသည်ငါ့ကို gobbledygook ပေး၏.
အဆိုပါရုပ်တုဆင်းတုကိုလည်းပူးတွဲပါဖိုင်အဖြစ် Evernote တင်ပို့ကြသည်, embedded မပုံရိပ်တွေ, extension ကို ".null" မ JPG နှင့်အတူ, သောသငျသညျကို manually ကစနစ်တကျပြသရကအမည်ပြောင်းနှင့် In-line ကိုပြသရမှတ်စုဖို့ကပြန်လည် add ဖို့ရှိသည်ဆိုလိုသည်.
အဆိုပါငွေစက္ကူပုံရိပ်တစ်ခုတင်ပို့, အက္ခရာရဲ့အဆုံးအပေါ်အချို့သောထူးဆန်း upticks အပါအဝင်, သိသာကလောင်အမည်၏အချို့သော ထား. ခြေရာခံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အ A5 pad ပါအပေါ်ဆွဲမဆိုအခြားအပေါ် drawing ကဲ့သို့ခံစားရ, ကိုယ့်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖိုလီယိုကနေနည်းနည်းပိုအမြောက်အများနှင့်အတူ. Cheryl Pilbeam အားဖြင့်ပုံကြမ်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါစနစ်ဖိအား sensitivity ကိုထောက်ခံပါတယ်, ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကျကျတစ်ခုသာခက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလတ်စားဖိအားနှင့်အတူကယ်တင်တတ်၏. အလင်းသည်လိုင်းများကိုတက်ခူးရကြဘူး, သောဒဏ်ငွေပုံကြမ်းနည်းနည်းထိခိုက်ခြင်းနှင့်လွဲချော်စေသည်; user ကစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သောလိုင်းများကိုတိကျစွာဖမ်းမိသို့မဟုတ်မခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိမသိရပါဘူး.
အရိပ်လည်းမဟုတ်ဘဲထို binary ဖြစ်ပါသည်. တစ်လိုင်းတက်ခူးပြီဆိုရင်, ထိပ်ကျော်ထပ်မံလိုင်းများရိုးရိုးပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရောင်မှု, အစဉ်အမြဲဆန္ဒရှိနှင့်ဆက်ဆက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြင်နိုင်ရဲ့အဘယျသို့ပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ပါဘူးအကျိုးသက်ရောက်မှုသောမက.
လိုင်းများစစ်မှန်တဲ့ခြေရာခံနေကြတယ်, သို့သော်, စာမကျြနှာမရွှေ့ပါဘူးဆိုရင်, သူတို့သည်သင်၏လက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သကဲ့သို့ဖြောင့်သို့မဟုတ်ကွေးဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်. သို့သော်ထိုစာမျက်နှာသို့ပြောင်းရွှေ့မ, နှင့်သင့်လေဖြတ်ကိုပုံဆွဲနှင့်အညီထဲကဖမ်းမိကြသည်မဟုတ်ရင်ဆင်းကျင်းပရဦးမည်, တစ်ဦးရှုပ်ထွေးဆုံးနိုငျသော.
အဆိုပါတင်ပို့ image ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့ပါးကလောင်လေဖြတ်အများစုကင်းမဲ့, drawing နေစဉ်စက္ကူအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်စဉ်, အချို့လိုင်းများရာအရပျထဲကပေါ်လာအောင်. Cheryl Pilbeam အားဖြင့်ပုံကြမ်း ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Wacom ဝါး Spark တစ် gadget ကအိတ်ကပ်တစ်ခုခုနှင့်အတူ£ 103 ကုန်ကျ, သေးငယ်တဲ့တက်ဘလက်သို့မဟုတ်တစ်ဒင်္ဂ-မထိုက်မတန်ကိစ္စတွင်အတွက်အိတ် တစ်ဦးက iPad Air လေကြောင်းလိုင်းများအတွက် 2. ဒါဟာနှစ်ဦးကိုအစားထိုးမှင်သည့်အရာတစ်ခုနှင့်အတော်လေးအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းတဲ့ 30-စာမျက်နှာ notepad နှင့်အတူကြွလာ.
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်စနစ်များ Livescribe Smartpen3Black က Edition ကို £ 120 ကုန်ကျ, ဒါပေမဲ့£ 1 တစ်ခုချင်းစီကုန်ကျတဲ့ notepad နဲ့ Refill အဘို့ပတ်လည်မှာ£3မှာစတင်ပြီးအထူးစက္ကူလိုအပ်.
အဆိုပါ Wacom ဝါး Spark ပယ်ကြီးမြတ်ဖြစ်ခြင်းမှည့်အနည်းငယ် features တွေဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါစိတ်ကူးသံကိုဖြစ်ပါတယ် – သင်သည်မည်သည့်စက္ကူကိုသုံးနိုင်သည်ထို့ကြောင့် pad ပါ၏နောက်ကျောမတ်လုပ်. ဒါပေမဲ့ A5 pad ပါအတော်လေးကန့်သတ်သည်, ဒါကြောင့်မှတ်စုများနဲ့ရေးဆွဲဘို့ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေန်းကျင်လှုံ့ဆျောနှင့်တွဲဖက်မှု၏ app ကို-side, အားလုံးသင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုလုပ်ငန်းများ၌ရာ, ခြစ်ရာမှတက်မဖြစ်.
ပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူဘဲအဘယ်သူမျှမအသံဖမ်းစွမ်းရည်ရှိပါတယ်, ထိုလက်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှုကိုအကောင်းဆုံးမဖြစ်, ဒါပေမယ့်ကလောင်, တစ်နည်းနည်းစျေးပေါ feeling စဉ်, အများဆုံးပြိုင်ဘက်ထက်သာမန်ဘောပင်ဖြစ်ခြင်းမှအများကြီးပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစစျေးအချိုဆုံးဖြေရှင်းချက်၏တဦးတည်းရဲ့ရရှိနိုင်နှင့် Wacom ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် inking format နဲ့မှတင်ပို့နိုင်ဖြစ်ခြင်းရုံ notetaking ထက်ပိုထိုသို့သုံးစွဲဖို့ရှာဖွေနေသူတွေအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
အကောင်းအဆိုး: မည်သည့် A5 စက္ကူကိုသုံးနိုင်သည်, လျောက်ပတ်သောအရေးအသားအတှေ့အကွုံ, သိမ်းထားဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်လွှဲပြောင်းခြင်း inking, Wacom မှင်လှာဘာသာစကားများပို့ကုန်
Cons: သေးငယ်တဲ့ pad ပါ, နေရတယ်လို့ဖိုလီယို, စျေးပေါ-ခံစားချက်ကလောင်, စာမျက်နှာရွေ့လျား, အဘယ်သူမျှမစကားသံကိုအသံဖမ်း, ကန့်သတ် app ကို, တင်ပို့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်
ဒစ်ဂျစ်တယ် output ကိုနှိုင်းယှဉ်စက္ကူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Livescribe Smartpen3Black က Edition ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ထိုကလောင် 2.0
ဂါးဒီးယန်းသတင်း© guardian.co.uk & မီဒီယာလီမိတက် 2010
App များ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အသက်နှင့်စတိုင်, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
← Huawei ကမိတ်ဆက် P9 နှင့် P9 Plus အားစမတ်ဖုန်းကို iPhone နဲ့ Galaxy အပေါ်ကိုယူမှ အဆိုပါအများစုမှာမျှော်လင့်က Playstation4အားကစားပြိုင်ပွဲ [RANKER] →
iPhone ကို 11: Apple ကပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာများနှင့်အတူသစ်ကို Pro ကိုစမတ်ဖုန်းလွှတ်တင်
စက်တင်ဘာ 10, 2019